ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို ပရိတ်သတ်တွေကိုရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ မေမီကိုကို – Cele Top Stars
July 17, 2021 By admin2News
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်တွေချစ်ကြတဲ့ MRTV-4 ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော မေမီကိုကို ကတော့လက်ရှိမှာ Covid 19 ရောဂါကူးစက် ခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်..။ရောဂါ ကူးစက်ခံရတာကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်နေတာ (၁၀)ရက်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဂရုစိုက်နေထိုင်စားသောက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်..။အဖျားဝင်ပြီး (၅ )ရက်လောက် အစားမဝင်ခဲ့ပေမယ့်အနံ့စပျောက်တဲ့ နေ့ကတည်းကကြိတ်မှိတ် စားသောက်နေပြီး ရောဂါကိုအလူးအလဲခံစားရတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံေ တွကို ဝေမျှပြောပြလာပါတယ်…။
ကိုယ်အေလးချိန်လည်း ကျသွားခဲ့ရပြီး လက်ရှိမှာတော့အနံ့ပြန်ရနေကာပရိသတ်တွေကိုလည်းစိတ်ဓာတ်မကျဖို့နဲ့အစားများများစားပြီးကျန်းမာအောင် နေကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်..။“ရက်ပေါင်း၁၀ ရက်ကို အောင်မြင် စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ပါပြီ….စားတယ်ငိုတယ်အိပ်တယ်… ဒီသုံးမျိုးနဲ့လည်ပတ်ခဲ့ ပါတယ်…. စဖျားတုန်းက ၅ရက်လောက်အစားမဝင်ပါဘူး အနံ့စေပျာက်တဲ့နေ့တည်းက သေမှာမကြောက်ပေမဲ့သေသွားမှာ စိုးတာနဲ့ အကုန်ပါးစပ်ထဲထည့်ပါတယ်…
အရင်ကဝိတ်ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ ငါးပိရည်နဲ့ မစားပါဘူး ခုဆိုငါးပိရည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ထမင်း ကိုတွယ်ပါတယ်… အစားလွန်ပြီး အိ အိအအတွေ အော်ရတဲ့အ ထိ စားမိပါတယ်😅…. အခန်း ထဲပိ တ်ပြီးနေပါတယ်… လေဖြတ်ထား တဲ့အဖေ့ကို ကူးမှာစိုးလို့….အိပ်တာကလ ည်း တရားလွန်အိပ် ပစ်တယ်…. တချက်တချ က်ကျရင် အသက်ရှု မရတော့လို့ လန့်ပြီး ငိုတယ်….ချောင်းတခါ ဆိုးရင် မေတ္တာပို့ပို့ပြီး အော်ငိုရတာ လည်းအမော(ငါလေ သေလည်း မသေနိုင်ေ သးဘူး သေရင်လည်း သေ လိုက်တော့) ဆိုပြီး🤭 …
ငိုပြီးရင် အားသာချက်က ပွင့်ထွက်သွား တယ်စိတ်တွေ နေလို့ကော င်းသွားတယ်… ကျွန်တော့်အ တွက် တစ်ခုရှိတာက ဖျားနေတဲ့အတွင်း ကြက်ပြုတ်လည်း မလိုအပ်ခဲ့သလို ကြက်ဥလည်း မစားခဲ့ပါဘူး…. ဖျားရင် ဒါတွေေ သာက်ရမှာ ထုံးစံလြို ဖစ်ပေမဲ့ ကျွ န်တော်မစားနိုင်ခဲ့ဘူး(စားမဝင်လို့)….ထမင်းစားက အစာမကြေတာေ တာ့ အနည်းငယ်ဖြ စ်တာပေါ့….ဒါမဲ့ ကျွန်တော်ထမင်းပဲစားပါတယ်….ကျွန်တော်ကိုဘေးနားမှာ ပြစုပေးတဲ့အစ်မနှစ်ေ ယာက်ဆို အမြဲလက်ဆေးနေတော့ သူတို့ကို မကူးခဲ့ဘူး…
ခဈြလှစှာသော ပရိတျသတျတှခေဈြကွတဲ့ MRTV-4 ရဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသမီးခြော မမေီကိုကို ကတော့လကျရှိမှာ Covid 19 ရောဂါကူးစကျ ခံစားနရေတယျလို့သိရပါတယျ..။ရောဂါ ကူးစကျခံရတာကွောငျ့ နမေကောငျးဖွဈနတော (၁၀)ရကျကြျောကွာမွငျ့ခဲ့ပွီဖွဈပွီးလကျရှိမှာတော့ဂရုစိုကျနထေိုငျစားသောကျနရေတာဖွဈပါတယျ..။အဖြားဝငျပွီး (၅ )ရကျလောကျ အစားမဝငျခဲ့ပမေယျ့အနံ့စပြောကျတဲ့ နကေ့တညျးကကွိတျမှိတျ စားသောကျနပွေီး ရောဂါကိုအလူးအလဲခံစားရတဲ့ အကွောငျးတှနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံေ တှကို ဝမြှေပွောပွလာပါတယျ…။
ကိုယျအလေးခြိနျလညျး ကသြှားခဲ့ရပွီး လကျရှိမှာတော့အနံ့ပွနျရနကောပရိသတျတှကေိုလညျးစိတျဓာတျမကဖြို့နဲ့အစားမြားမြားစားပွီးကနျြးမာအောငျ နကွေဖို့ တိုကျတှနျးထားပါသေးတယျ..။“ရကျပေါငျး၁၀ ရကျကို အောငျမွငျ စှာဖွတျကြျောနိုငျပါပွီ….စားတယျငိုတယျအိပျတယျ… ဒီသုံးမြိုးနဲ့လညျပတျခဲ့ ပါတယျ…. စဖြားတုနျးက ၅ရကျလောကျအစားမဝငျပါဘူး အနံ့စပြောကျတဲ့နတေ့ညျးက သမှောမကွောကျပမေဲ့သသှေားမှာ စိုးတာနဲ့ အကုနျပါးစပျထဲထညျ့ပါတယျ…
အရငျကဝိတျထိနျးတဲ့အနနေဲ့ ငါးပိရညျနဲ့ မစားပါဘူး ခုဆိုငါးပိရညျတဈမြိုးတညျးနဲ့ ထမငျး ကိုတှယျပါတယျ… အစားလှနျပွီး အိ အိအအတှေ အျောရတဲ့အ ထိ စားမိပါတယျ😅…. အခနျး ထဲပိ တျပွီးနပေါတယျ… လဖွေတျထား တဲ့အဖကေို့ ကူးမှာစိုးလို့….အိပျတာကလ ညျး တရားလှနျအိပျ ပဈတယျ…. တခကျြတခြ ကျကရြငျ အသကျရှု မရတော့လို့ လနျ့ပွီး ငိုတယျ….ခြောငျးတခါ ဆိုးရငျ မတ်ေတာပို့ပို့ပွီး အျောငိုရတာ လညျးအမော(ငါလေ သလေညျး မသနေိုငျေ သးဘူး သရေငျလညျး သေ လိုကျတော့) ဆိုပွီး🤭 …
ငိုပွီးရငျ အားသာခကျြက ပှငျ့ထှကျသှား တယျစိတျတှေ နလေို့ကော ငျးသှားတယျ… ကြှနျတေျာ့အ တှကျ တဈခုရှိတာက ဖြားနတေဲ့အတှငျး ကွကျပွုတျလညျး မလိုအပျခဲ့သလို ကွကျဥလညျး မစားခဲ့ပါဘူး…. ဖြားရငျ ဒါတှေေ သာကျရမှာ ထုံးစံလွို ဖဈပမေဲ့ ကြှ နျတျောမစားနိုငျခဲ့ဘူး(စားမဝငျလို့)….ထမငျးစားက အစာမကွတောေ တာ့ အနညျးငယျဖွ ဈတာပေါ့….ဒါမဲ့ ကြှနျတျောထမငျးပဲစားပါတယျ….ကြှနျတျောကိုဘေးနားမှာ ပွစုပေးတဲ့အဈမနှဈေ ယာကျဆို အမွဲလကျဆေးနတေော့ သူတို့ကို မကူးခဲ့ဘူး…
သူတို့က သနျမာတဲ့ သူတှေ😁….ဘာပဲပွောပွောထပျ မှာခငျြတာ ကတော့စားပါ….အရမျးစားပါနျော….ပွီးတော့ 💊ဆေးကိုလညျး ပတျလညျအောငျ သောကျကွပါနျော.. .စိတျဓာတျမကပြါနဲ့ Fighting ပါ….💪🏻ကြှနျတေျာ့ကို စိတျပူေ ပးကွတဲ့ သူတှေ အကု နျလုံးကို ကြေးဇူးမှခြိပါလို့…🥰..” ဆိုပွီး မမေီကိုကိုက ပွောပွထားတာပါ..။ပရိသတျတှကေလညျး ကနျြးမာရေး မကောငျးတဲ့ သူမကို စိတျပူနကွေပွီး လကျရှိမှာ အကောငျး ဆုံးရငျဆိုငျဖွတျသနျးေ နတာကွောငျ့ အားပေးစကားေ တှလညျး ပွောထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
သူမရဲ့အလုပ်တွေကို နေမကောင်းပြီးမထနိုင်တဲ့ကြားက ကူညီပေးနေတဲ့ချစ်သူလေးကို ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ